Scorpio ee Zodiac qadiimiga - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Scorpio waa xubinta saddexaad ee Burjika waana sawirka Dabaqoolkii sunta ah. Scorpio sidoo kale waxay la xidhiidhaa xiddigaha yaryar (Decans) Ophiucus, Abeesooyinka iyo Corona Borealis. Horoscope-ka maanta haddii aad dhalatay inta u dhaxaysa Oktoobar 24 iyo November 22 waxaad tahay Scorpio. Akhrinta horoscope casriga ah ee zodiac, waxaad raacdaa talada horoscope ee Scorpio si aad u hesho jacayl, nasiib wacan, caafimaad iyo inaad hesho aragti shakhsi ahaaneed.
Halkee buu ka yimid Scorpio?
Waa kan sawirka xiddigaha sameysa Scorpio. Ma ku arki kartaa dabaqallooc sawirkan xiddigaha? Waxaad u baahan doontaa mala-awaal badan!
Sawirka xiddigaha Scorpio. Ma arki kartaa dabaqallooc?
Xitaa haddii aan ku xirno xiddigaha ‘Scorpio’ oo leh xariiqyo, weli way adag tahay in la arko Dabaqalka. Laakiin calaamadani waxay dib u noqotaa inta aan ognahay taariikhda aadanaha.
Kooxda Scorpio waxay ku xiran tahay khadadka. Dabada kor loo qaaday way caddahay. Laakiin sidee ku garanaysaa in uu yahay dabaqallooc oo aanu ahayn jillaab?
Halkan waxaa ah Burji oo ku yaal Macbadka Dendera ee Masar, in ka badan 2000 oo sano, oo leh sawirka scorpion ee zodiackan oo ku wareegsan casaan.
Scorpio ee Zodiac Dendera ee Masaarida qadiimiga ah
Boodhka National Geographic ee zodiac wuxuu muujinayaa Scorpio sida lagu arkay Hemisphere Koonfureed. Inkasta oo xiddigaha National Geographic ku xiran yihiin Scorpio oo leh xariiqyo, haddana way adag tahay in ‘lagu arko’ dabaqallooc ka mid ah xiddigahan.
Scorpio waxa lagu qeexay Boodhka Zodiac ee Qaranka
Sida xiddigaha kale, kooxda Scorpio ee dabaqallooc diyaar u ah inuu garaaco lama abuurin xiddigaha laftooda. Balse, fikradda oo waxaa hor yimid dabaqalloonkii wax arka. Xiddiggii ugu horreeyay ayaa markaas fikraddan ku dul-saaray xiddigaha si ay u noqoto calaamad soo noqnoqonaysa. Dadkii hore waxay u tilmaami karaan Scorpio caruurtooda waxayna u sheegi karaan sheekada la xiriirta.
Sheekadii Zodiac ee Qadiimiga ahayd
Sidaa darteed xiddigaha Zodiac waxay si wadajir ah u sameeyaan Sheeko – sheeko xiddigiye ah oo lagu qoray xiddigaha. Calaamadda Scorpio waa cutubka saddexaad ee laba iyo toban. Waxaan ku aragnay Virgo in Qur’aanka kariimka ah iyo Baybalkuba ay sheegeen in Eebbe abuuray xiddigaha. Haddaba sheekadu isagaa leh oo waxaa la bixiyay bilowgii taariikhda aadanaha. Waa qisadan xiddigiska ah oo bini’aadmigii ugu horreeyay ay akhriyeen waxa aan hadda u naqaanno zodiac.
Markaa zodiac-kii asalka ahaa ma ahayn horoscope si uu u hago go’aamadaada maalinlaha ah si aad u hesho nasiib wacan, caafimaad, jacayl iyo nasiib ku salaysan taariikhda dhalashadaada iyo dhaqdhaqaaqa meerayaasha. Waxa ay ahayd tilmaan Alle ina tuso Jidka Toosan oo lagu duubay Burji si ay habeen walba dadku u arkaan oo u xusuustaan. Sheekadu waxay ku bilaabatay ballankii farcankii bikrada ee Virgo. Waxay ku sii socotaa miisaanka Miisaanka, isagoo ku dhawaaqaya in dheelitirka camalkeena uu aad ugu fudud yahay Boqortooyada Jannada. Waa in qiimo la bixiyaa si loo soo furto camalkeena iftiinka.
Scorpio ee Sheekadii Zodiac qadiimiga
Laakiin yaa dalbanaya lacagtan? Scorpio ayaa ina tusa oo muujisa khilaafka jannada ee u dhexeeya Abuurka Virgo iyo hangarallooyinka. Si aan u fahamno isku dhacan waa inaan aragnaa Scorpio oo ay weheliso Decan (urur la socda oo ku xidhan) Ophiuchus.
Xiddigaha Scorpio iyo Ophiuchus. Laga soo bilaabo daabacaaddii 1886 ee Muuse iyo Geology (Samuel Kinns, London).
Kooxdu waxa ay sawirtay Dabaqal aad u wayn (Scorpio) oo isku dayaya in uu ciribta nin xoog badan (Ophiuchus) ku tumanayo, halka Ophiuchus uu ku tumanayo Dabaqanarka oo isla mar ahaantaana la legdamaya abeeso duuban. Dabaqoolkii weynaa ayaa dabada kor ugu qaaday cadho, diyaarna u ah inay ninka cagtiisa ku dhufato. Calaamadani waxay noo sheegaysaa in isku dhacani uu yahay ilaa-dhimasho. Scorpio waxaan ku bilaabaynaa inaan barano nooca lacag bixinta si aan nooga soo furno Libra, Miisaanka Cadaaladda. Scorpio iyo Abeesadu waa laba sawir oo cadaw isku mid ah – Shaydaanka.
Calaamadan xiddiguhu waxay soo celinaysaa ballantii loo bixiyay a Saxeex Hazrat Adam Beerta Jannada oo lagu qoray Tawreed markuu Rabbi u sheegay Shaydaan (oo abeesada u ekaa) wax ku saabsan. Abuurka Virgo
“… waxaad ku dhufan doontaa ciribtiisa, isna madaxa buu kuu burburin doonaa”
(Bilowgii 3: 15)
Dabaqoolkii ayaa ciribta ku dhuftay markuu nebi Ciise Al Masih NNKH ahaa iskutallaabta lagu qodbay, laakiin hangaralluhu wuxuu la kulmay guuldarro dhimasho ah markii nebigu saddex maalmood ka dib dhimashadii ka soo kacay. Xiddigaha Scorpio, Ophiucus iyo Serpens ayaa arrintan wax ka sii sheegay wakhti dheer ka hor iyaga oo u sii marinaya Kan samada ku hagaajiyey.
Isku dhaca Scorpio oo ay xusuustaan ​​dadka kale
Colaadan ballanka ahayd ee ka bilaabatay Beerta oo gaadhay heerkii ugu sarreeyey ee iskutallaabta dusheeda ayaa waxaa lagu xasuustaa dhaqamo badan oo hore.
2200 BCE shaabadda Baabiloon ee Matxafka Ingiriiska oo muujinaysa jirrabaadda Aadan iyo Xaawo
Maska ayaa madaxa lagu burburiyay buuggii hore ee Masaarida ee dhintay
Labadan sawir waxay muujinayaan sidii Masriyiintii hore iyo Baabiyloon labaduba ay Jannada ku dhex xasuusan jireen Aadam iyo Xaawo iyo weliba ballankii ahaa burburinta madaxa abeesada. Giriigii hore ayaa tan ku xusuustay Scorpio.
Waxaad raadin kartaa xiddiga Ophiuchus laftiisa: si aad u dhalaalaysa madaxiisa hoostiisa ayaa ka muuqda garbihiisa dhalaalaya. Gacmihiisu… si adag u xajiya Abeeso, kaas oo ku wareegsan dhexda Ophiuchus, laakiin isaga, isagoo labada cagood si fiican u taagan, wuxuu ku tumanayaa bahal weyn, xataa Scorpion, oo si qumman isha iyo naaska ugu taagan.
Aratus isagoo xiganaya Baxniintii 4aad ee BCE Gabayaagii Giriigga
Serpens iyo Crown ee Corona Borealis
Decan saddexaad ee la xidhiidha Scorpio waa Corona Borealis – taaj la dul saaray Ophiuchus iyo Serpens. Tixgeli sawirka xiddigiska ee saddexda Scorpio decan ee la wada muujiyey.
Ophiuchus iyo Serpens oo isha ku haya Corona Borealis – Crown
Labada Ophiucus iyo Serpens labaduba waxay eegayaan The Crown – kooxda xiddigaha loo yaqaan Corona Borealis. Dhab ahaantii, labadan waxay u dagaallamayaan Crown waxaanan arki karnaa in Serpens uu isku dayayo inuu qabsado Corona Borealis.
Kooxda Maska (Serpens) oo u dhow – oo gaadhay Crown – Corona Borealis
Serpens waxay ku dadaalaysaa inay qabsato Boqortooyada. Tani waxay muujinaysaa nooca uu yahay isku dhaca labada. Tani ma aha oo kaliya isku dhac-ku-dhimasho, laakiin sidoo kale waa halganka xukun iyo xukun. Abeesada iyo Ophiucus waxay dagaallamaan si ay u go’aamiyaan cidda yeelan doonta taajka.
Sheekada Scorpio – aniga iyo adiga
Scorpio sawiro fariin loogu talagalay dadka oo dhan, ma aha oo kaliya kuwa dhashay inta u dhaxaysa Oktoobar 24-Noofambar 22. Scorpio ma hanuuniyo in ay maal badan ama jacaylka, laakiin wakhtiyadii hore laga soo sawiray xiddigaha adiga iyo adiga si aan u ogaano dhererka weyn ee abuurahayaga u tag si aad nooga furato camalkeena nuur, oo u baahan halgan weyn oo dhimasho iyo xaq u leh inuu u taliyo kii guulaysta. ‘Taliyaha’ waa run ahaantii macnaha ‘Masih’.
Horoscope-ka Scorpio ee Qoraallada
Maadaama Horoscope-ku uu ka yimid Giriigga ‘Horo’ (saac) oo qoraallada nebiyadu ay calaamad u yihiin saacadaha muhiimka ah ee annaga, waxaan ogaan karnaa ‘saacaddooda Scorpio’. Scorpio horo is
31 Imminka weeye markii dunidan la xukumi lahaa, imminka kan madaxda dunida ah dibaddaa lagu tuuri doonaa. 32 Aniguna haddii kor layga qaado dhulka, dhammaan xaggaygaan u soo jiidi doonaa. 33 Wuxuu waxaas u yidhi inuu tuso siduu u dhiman doono 30 Mar dambe wax badan idinlama sii hadli doono, maxaa yeelay, kan madaxda dunida ahu wuu imanayaa, isaguna waxba iguma laha.
Yooxanaa 12:31-33, 14:30
Isagoo leh ‘Hadda waa saacaddii’ Nebigu wuxuu noo calaamadiyay ‘horo’. Scorpio wuxuu nooga sheegaa khilaafka ku saabsan cidda xukumi doonta. Sidaa darteed Isa al Masih wuxuu ugu yeedhay Shaydaanka ‘amiirka adduunka’ iyo taas saacad wuxuu u soo socday inuu la kulmo isaga oo isku dhac ah. Shaydaanku wuu inagu haystaa dhamaanteen mar haddii miisaanka camalkeennu fudud yahay. Laakin Isa al Masih wuxuu si kalsooni leh u sheegay in uusan ‘wax igu qabin’ oo macneheedu yahay in awoodda dembiga iyo dhimashadu aanay isaga ku lahayn. Taasi horo waxay tijaabin lahayd hadalkan iyadoo labadan cadaw ay iska horyimaadeen.
Akhriska Horoscope-kaaga ee Zodiac-kii hore
Markaa adiga iyo aniguba waxaan maanta codsan karnaa akhrinta horoscope Scorpio iyadoo la raacayo tilmaantan soo socota.
Scorpio wuxuu noo sheegay inaad u adeegto qof. Qof ayaa sheegan kara taajka qalbigaaga. Ma aha jacayl, xaas ama xidhiidh kaas oo leh sheegashada kama dambaysta ah ee taajka qalbigaaga. Waa ‘amiirka dunidan’ ama ‘masih’ – kan xukumi doona boqortooyada Ilaah. Bal hadda xisaabi cidda taajkaaga haysata. Haddaad u noolaato inaad naftaada badbaadiso, markaas waxaad taajkaadii u dhiibtay amiirka dunida, oo naftaada waad waayi doontaa. Mar haddii dabeecadaha scorpio ay yihiin inuu dilo, wax xado oo uu dumiyo, isagu kuma habboona haddii uu taajkaaga haysto.
Is baar si aad u aragto in aad u baahan tahay in aad ‘towbad keento’ siduu Nebi Yaxye si cad u baray. Waxaad heli kartaa tusaalooyin wanaagsan si aad fikrad fiican uga hesho micnaha tan. Ma aha meerayaasha laakiin qalbigaaga ayaa go’aamin doona natiijada adiga. Tusaalooyinka wanaagsan in lagu daydo ma aha quduusiinta quduuska ah laakiin dadka caadiga ah oo leh sifooyin joogto ah oo toobad keenay. Towbada waxaa la samayn karaa maalin kasta oo toddobaadka ah oo laga yaabo inay u rogaan caado waa in la sameeyaa maalin kasta.
Dheeraad ah ee Sheekada Zodiac
Sheekadii halgankii labada cadaw ee waa waynaa way socotaa Sagittarius, (ama laga fahmay bilowgii la Virgo).
Si aad u qoto dheer u gasho sheekada qoran ee Scorpio:
Calaamadda 3 ee Ibraahim – allabari
Saxeexa 1 ee Muuse – Kormaridda
Xaggee ‘Masiix’/’Masih’ ka yimid? Waxa loola jeedaa?
Masihku: Ma u imanayaa inuu xukumo ama la gooyo?
Calaamada Addoonka Soo socda
Yaxye iyo toobad keen
Isa al Masih iyo calaamada Yuunus
Isa al Masih wuxuu badbaadiyay Khaa’inul-laawe lumay
Shaydaanku wuxuu u soo degay inuu ku dhufto Masih
Isa al Masih & Jimce Wanaagsan
Quraanka & Taariikhda: Isa al Masih miyuu dhintay?
Tags:adam and evecorona boralisophiucusscorpioscorpio horoscopescorpion zodiacserpens